यसकारण बालबालिकाको प्रशंसा गर्नुहोस् ! - Dainik Nepal
दैनिक नेपाल २०७६ माघ ७ गते १४:२९
काठमाडौँ । तपाईंले कहिल्यै बालमनोविज्ञानको बारेमा सोच्नुभएको छ ? उनीहरुको आनीबानी व्यवहारको विषयमा ध्यान दिनुभएको छ ? उनीहरुले गरेका गतिविधिबारे गहिरिएर सोच्नुभएको छ ?
यदि छैन भने उनीहरुका क्रियाकलापबारे आजैदेखि ख्याल गर्ने बानी बसाल्नुहोस् । मनोविद्का अनुसार पाँच वर्षसम्म बालबालिकालाई आमाबुबाको न्यानो माया र साथ चाहिन्छ ।
तीन वर्षका बालबालिका जुनसुकै काम गर्न पनि अघि सर्छन् । चार वर्ष पुगेपछि आफ्नो सामानका लागि झगडा गर्न थाल्छन् । पाँच वर्षको पुग्दा अरुलाई हेप्न र हेपिन थाल्छन् ।
उसको होडबाजी शुरु हुन्छ । साधारणतया गलत र सही के हो भन्नेबारेमा विचार गर्न थाल्छन् । यो बेलामा अरुको नक्कल गर्ने र ठूला मान्छेले जस्तै क्रियाकलाप गर्ने रुचाउँछन् ।
चकचके र चुलबुले अवस्थामा बालबालिकाको मनोविज्ञान बुझेर काम गर्न सकिएन भने उनीहरुमा दीर्घकालीन असर हुने बताउनुहुन्छ मनोविद् डा नरेन्द्रसिंह ठगुन्ना । उहाँका अनुसार नराम्रै काम गरेको भए पनि बालबालिकालाई प्रशंसा गर्नुपर्छ, ताकी उनीहरुको आत्मबल र जाँगरमा कमी नआओस् ।
“अभिभावकको निगरानीमा बालबालिकालाई उमेरअनुसारको काम गर्न दिनुपर्छ, दोहोरो सञ्चार गर्नुपर्छ, अरुका अगाडि राम्रा कुराको प्रशंसा गर्नुपर्छ, तब मात्रै उनीहरुको क्षमता विकास हुन्छ र आत्मबल बढ्छ, जसले भविश्यसम्मै बालबालिकालाई फाइदा पुग्छ”, डा ठगुन्नाले भन्नुभयो ।
बालविकास विज्ञका अनुसार एकदेखि तीन वर्षसम्मको बालबालिकामा वातावरण र सामग्रीमा निर्णय गर्ने अवसर पाएमा स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्छन् भने अवसर नपाएमा शङ्का र दोधारको धारणा विकास गर्छन् ।
तीनदेखि छ वर्षमा नयाँ–नयाँ सीप सिक्न अग्रसर हुने हुँदा नेतृत्व लिने र निर्णय गर्ने अवसरमा अवरोध आएमा आत्मविश्वासमा कमी आई आफूप्रति नै दोषी भावना राख्दै क्रुर स्वभावको बन्न पुग्छन् ।
अध्ययनअनुसार छदेखि १२ वर्षका बालबालिका आफूले गरेका कामप्रति अरुबाट स्याबास पाउन लालायित हुन्छन् । उनीहरुको चाहना र भावना बुझेर अभिभावक, शिक्षक, समुदाय र स्याहारकर्ताले उनीहरुलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ ।
बाह्रदेखि २० वर्षमा ‘म को हुँ’ भनेर पहिचान गर्नसक्ने भएमा उनीहरुमा सकारात्मक सोचको विकास हुने विज्ञहरुको भनाइ छ । यदि नकारात्मक भयो भने द्विविधाको भावना सिर्जना भई आफैँलाई कमजोर बनाउँदै लैजान्छ ।
बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि उनीहरुको मनोविज्ञान बुझेर अभिभावकले त्यहीअनुसारको क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रारम्भिक बाल विकासविज्ञ मीनाक्षी दाहाल बताउनुहुन्छ ।
“अहिले हाम्रो ध्यान उपचारमा केन्द्रित छ तर त्योभन्दा पहिले समस्या आउनै नदिन प्रचारात्मक कार्यक्रम गर्न जरुरी हुन्छ”, डा दाहाल थप्नुहुन्छ ।
प्रतिकूल वातावरणले बालबालिकाका लागि मानसिक र संवेगात्मक पक्षको विकासमा क्षति हुने र उचित ढङ्गले मनो–सामाजिक पक्षको विकास हुँदैन ।
घरेलु हिंसा, उपेक्षित र स्याहार नपुगेका बालबालिकामा अन्यको तुलनामा मानसिक र व्यावहारिक समस्या देखापर्छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक इमनारायण श्रेष्ठ बाल क्षमता विकासमा पारिवारिक वातावरण हुनु जरुरी रहेको बताउनुहुन्छ ।
उहाँले अझै पनि मुलुकमा प्रारम्भिक बालविकासलाई ध्यान दिन नसकेको महसुस भएको बताउँदै अब बन्न लागेको सङ्घीय शिक्षा ऐनले सम्बोधन गर्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रारम्भिक बाल विकासविज्ञ डा दाहालले पुस्तक बालबालिकाको क्षमता विकासका लागि पुस्तक उपयोगी रहेको बताउनुहुन्छ । चित्र र विज्ञका लेख समावेश गरी बनाइएको पुस्तक हरेक बाल विकास केन्द्र र सहयोगी कार्यकर्ताका लागिसमेत उपयोगी छ ।
सेतो गुराँसले बालविकासका लागि आज काठमाडौँमा एक अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रमसमेत आयोजना गरेको थियो । –रासस